Siyi-Blog Yezindaba Zomphakathi Eziyi-10! | Martech Zone
Siyi-Blog Yezindaba Zomphakathi Eziyi-10!
NgoMsombuluko, Januwari 30, 2012 NgoMsombuluko, Januwari 1, 2018 Douglas Karr
Kuhlala kumangalisa njalo ukuqashelwa ontanga yakho - kepha namuhla kuthatha isinqamu! UMichael Stelzner I-Social Media Examiner ibhulogi, kude, ingenye yamabhulogi ezokuxhumana athandwa kakhulu, aphethwe kahle futhi aphethwe kahle ku-Intanethi. Akagcini ngokuqukethwe okuhle nemicimbi emangalisayo ... futhi akazideli ekuphakamiseni abanye.
Namuhla, ukushicilelwa kwami ​​kwaqanjwa njengenye yamabhulogi we-Social Media Examiner's Top 10 Social Media! Nalu lonke uhlu:
Imilomo Yomphakathi - Imilomo Yomphakathi, i-brainchild kaFrancisco Rosales, inikeza ukubukeka okujulile nokwethembeka ekumaketheni kwezokuxhumana nakwizitayela ezinomthelela embonini yethu. Isayithi liqukethe okuthunyelwe okuningiliziwe ngezibonelo zomhlaba wangempela, futhi kukhulunywa ngezihloko ezintsha nezinzima.
I-ViralBlog - I-ViralBlog inikeza ukusakazwa kwansuku zonke kwezindlela zokuxhumana zenhlalo kanye nogqozi ngezifundo zamacala nezinye izindatshana ezithokozisayo. Isayithi inokuqukethwe okuhle kakhulu ngamathiphu nezeluleko eziwusizo.
UJeff Bullas - UJeff Bullas ubhekisisa ukuthi amabhizinisi angatholakala kanjani online ngokusebenzisa imithombo yezokuxhumana. Isayithi inokuqukethwe okuhle kakhulu okunemininingwane eqinile yezokuxhumana.
UHubze - UHubze wakhe izithameli ngokugxila kumathrendi ezokuxhumana nabantu namathiphu kumaqhinga wokukhangisa ezinkundleni zokuxhumana. Isayithi iqukethe izinhlobo ezinhle zemidiya, kufaka phakathi ama-athikili nama-podcast.
Ingonyama Yokuthengisa - Ingonyama Yokuthengisa kusuka kuMarcus Sheridan ibhulogi efuna ukwakha umphakathi ngokukhangisa okungenayo, ukubhuloga, ibhizinisi kanye nempilo. Isayithi likhuthaza umphakathi oqinile ngokubamba iqhaza okukhulu ngokusebenzisa imibono.
Ukucindezela Komphakathi - Ukucindezela Komphakathi kusuka kuStanford Smith kunikeza ngamathiphu nezinsiza zokubhuloga ezisebenzayo ngombono omusha. Isayithi liqukethe okuthunyelwe okudala, okufundisayo nokufundekayo ngezeluleko ezijulile kunezijwayelekile.
UHeidi Cohen - UHeidi Cohen inikeza ukuqonda okuhlakaniphile kumaqhinga wezokuxhumana nabantu kanye nezitayela, konke ngenkathi kwenza lokhu kube lula okulula. Isayithi liqukethe okuqukethwe okuphelele nokucabangayo.
I-MarketingTech Blog - I-MarketingTech i-blog inikeza indlela egxile kwezobuchwepheshe ekumaketheni okusha kwemidiya. Isiza sihlanganisa izihloko ezahlukahlukene kanye nabezindaba, kufaka phakathi umsakazo nevidiyo.
Imidiya ethandekayo - Imidiya ethandekayo igcina abafundi besesimweni samanje ngezimboni zamathuluzi namathuluzi amasha ngenkathi futhi inikezela ngamasu namasu wokusebenzisa ukumaketha kwe-Facebook nokuxhumana nabantu. Isayithi liqukethe imininingwane yamanje yamathuluzi amasha nezinkundla.
SplashMedia - SplashMedia inikeza ukuthakazelisa kuthatha amasu, amathiphu namathrendi, ngenkathi ama-SplashCasts abo enikeza izindaba ezinhle zempumelelo. Isayithi lifaka ukusetshenziswa okuhle kombukiso wevidiyo kanye nokuthunyelwe okuhlukahlukene ngokuqukethwe okuhle okujulile.
Ngibonga abasebenzi namajaji avela kuSocial Media Examiner. Ngithobekile ngokuphelele futhi ngiyabonga ngakho konke ukuxhaswa osinikeze khona kule minyaka edlule!
Tags: u-heidi cohenhubzeUJeff Bullasimidiya ethandekayomarcus sharidanI-Marketing Tech Blogukucindezela umphakathiibhulogi yezokuxhumanaimilomo yomphakathiumabhebhanastandford smithingonyama yokuthengisaamabhulogi aphezuluibhulogi yezokuxhumana ephezuluPhezulu eziyishumiamagciwane
Izinto Ezibalulekile Ekhasini Lasekhaya Eziyi-12
IGanda leGoogle ku-Plain English
Jan 30, 2012 ngo-3: 16 PM
Halala! Lokhu kuwudumo olufanelwe kahle, futhi ukwinkampani emangalisayo! Siyabonga ngokusikhuthaza sonke.
Jan 30, 2012 ngo-3: 18 PM
Ngiyabonga kakhulu, @ twitter-277728414: disqus!
Jan 30, 2012 ngo-8: 12 PM
UDoug, ubeke i-midwest ngokoqobo ebalazweni uma kukhulunywa ngolwazi oluwusizo nokuphawula okusiza amabhizinisi amaningi ukufeza nokudlula izinhloso zawo zokumaketha. Izinkundla zokuxhumana zigcwele umsindo omhlophe. Siyabonga ngokuba yizwi elicacile lolwazi olusisiza sonke senze kangcono, futhi senze izinto zenziwe. Siyakuhalalisela ngokuhlonishwa kwakho okufanelekile.
Jan 30, 2012 ngo-8: 28 PM
Marty, ngiyabonga kakhulu. Amagama anomusa kakhulu avela kumuntu engimhlonipha kakhulu! (manje uma singathola iMidwest ukuthi iqaphele 😉
UJeff Downer Indianapolis IN
Jan 31, 2012 ku-11: 49 AM
Halala. Yingakho usohlwini lwami lokubekisa.
Feb 1, 2012 ngo-7: 55 AM
Siyakuhalalisela. Lokhu kufanelekile, uhlala njalo ungokunye kwami ​​okuphezulu ukuya emithonjeni yazo zonke izinto zenhlalo newebhu
Feb 1, 2012 ngo-8: 47 AM
May 13, 2012 ku-7: 44 AM
Akungabazeki ukuthi i-Social Media Examiner iyibhulogi ephezulu kakhulu kuma-blog wezokuxhumana.
Izenzo zokuzidela zihlala zikhokha ngokuhamba kwesikhathi. Kusukela manje ngizoba
ngumsebenzisi ojwayelekile. Ngiyethemba ukuthi izongisiza ekuthuthukiseni amakhono ami njenge-